Semalt: Ingabe i-Botnet I-Cyberweapon Enamandla Kakhulu?
Ama-Botnets njengamanje abhekwa njengezikhali eziphezulu kakhulu eziphethwe amandla we-cyber kokuqukethwe embonini yokukhangisa. I-Botnets ithatha isisetshenziswa sabasebenzisi bokuphela kwekhompuyutha nokufinyelela kokufinyelela ngaphandle kwemvume yabanikazi nolwazi. UJason Adler, umphathi we-8 (Semalt uMphathi Wezokuphumelela Kwamakhasimende, uchaza ukuthi lesi sikhali se-cyber singathinta amakhompiyutha, amaprinta noma amarekhodi.
Okudingayo ukwazi ngamabhunethi
Ama-botnets ayinethiwekhi yamagajethi eyalwe yi-malware ukuze angene kumawebhusayithi namadivayisi ngokuthula. I-botnet iyalwa ngabelusi bamabhodlela, ama-cybercriminals alawula amabhubhu ngaphandle kokungena ngaphakathi kwikhompyutha. Abelusi bebhola basebenza ngokusizwa ngamaseva omyalelo abanika amandla okukhipha ukuhlaselwa ezinhlanganweni.
Ngokuvamile, zisetshenziselwa ukweba nokufinyelela ulwazi lwezezimali namaphasiwedi. Ukuphika kwe-service okusabalalisiwe kungenye ukusetshenziswa kwe-botnets, lapho i-bots ilawulwa khona ukuze i-spike ithrafikhi noma ithumele izicelo ezikhohlisayo kuwebhusayithi ethize. Ngokuhamba kwesikhathi, isayithi elihlosiwe liphela ligcwele ngokweqile, isimo esibacindezela ukuba bavale. Muva nje, ama-robot amanethiwekhi asetshenziselwa ukutshontsha imali emkhankasweni wokusiza.
Ukuphakama kwama-robot amanethiwekhi
Ukwanda nokwandiswa kwe-intanethi yezinto kuye kwadlala indima ebalulekile ekwandeni kwamabhodnethi. Ama-intanethi wezinto (i-IoT) amadivayisi angenziwa kalula futhi ahlaselwe amabhodlela uma kuqhathaniswa namakhompyutha. I-Shodan, injini yamadivayisi we-IoT, isetshenziselwa kakhulu abelusi bebhola ukukhomba nokubona amadivayisi asengozini kanye namagajethi ku-intanethi.
Abathuthukisi abakha i-botnet abasebenzisi kuphela ama-robot amanethiwekhi ngenzuzo yabo yezimali kepha bawaqashisele nabanye abahlaseli abanonya. Abahlaseli basebenzisa ama-botnets ukweba futhi bathole ulwazi olubalulekile kumawebhusayithi. I-bredolab botnet yisibonelo senethiwekhi ye-robot eqashwe kwabaduni. Ngokuphindaphindiwe, abahlaseli baqedile ukukhokha unjiniyela inani elinganiselwa ku-$ 120,000 njalo ngenyanga.
Mirai kwakungenye indlela yokuhlaselwa kwenkonzo yokuphika okwenziwe yi-viral. Abathuthukisi abenza i-botnet banikeze isikhali se-cyber sokukhokha okulinganiselwa ku-$ 7,500 ngehora.
Amathiphu wokuthi ungavikela kanjani i-PC yakho kuma-botnets
Ama-botnets abhekwa njengengozi njengoba ukuhlasela kuqala ukusebenza ngaphandle kwesaziso sabasebenzisi bekhompyutha. Ngemuva kokuba kuthathwe isisindo, ikhompyutha yakho ibonisa insipho emotweni futhi isebenza kancane. Nazi izindlela zokuvikela idivayisi yakho ekuthelelekeni kwinethiwekhi ye-botnet.
Gwema izici ezingadingekile zokusebenza kukhompyutha yakho. Abaqaphi bangasebenzisa amadivaysi ngokusebenzisa izici ezivulekile namachweba.
Buyekeza njalo ihadiwe ne-software kudivayisi yakho. Ukugcina izinhlelo zakho kanye nesofthiwe ebuyekeziwe kusiza ukuthola nokuvimbela amafayela anonya nama-bots ekufinyeleleni kukhompyutha yakho.
Sebenzisa amaphasiwedi aqinile futhi ushintshe izilungiselelo ezizenzakalelayo zekhompyutha yakho ukuze ugweme ukuhlehliswa. Ama-Malware nabahlaseli baskena amaphasiwedi abuthakathaka nezilungiselelo zefektri ukufinyelela kudivayisi yakho.
Emkhakheni wamanje wokukhangisa, ama-botnets abhekwa njengama-cyber-attack at the Internet. Ungavumeli ama-botnets awe engozini emkhankasweni wakho we-intanethi. Hlala uqaphile ngokusebenzisa amathiphu angenhla.